कुनै पनि उमेर मा रचनात्मकता खुशी ल्याउँछ। यो प्रक्रिया उहाँले एक वर्ष वा असी एक, आफ्नो प्राण, भावना, र आफ्नो विशेष समझ राख्दछ छ कि छैन भनेर, हरेक व्यक्ति धेरै व्यक्तिगत छ। एक व्यक्ति हात रंग मा लिन्छ गर्दा एउटा विशेष उज्ज्वल व्यक्तित्व हुन्छ।
तपाईं केहि आकर्षित गर्न जरुरी आवश्यकता छ मानौं। वा आफ्नो बच्चा रेखाचित्र को कार्य स्कूल घर आए र एक प्रश्न तपाईं गरिएका: यो पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा यो रूपमा गाह्रो छ "कसरी शरद ऋतु परिदृश्य रंग गर्न"।
यस लेखमा मैले तपाईंलाई कसरी समय र प्रयास को धेरै बर्बाद बिना शरद ऋतु परिदृश्य आकर्षित गर्न एउटा सरल, तर धेरै रचनात्मक तरिका साझेदारी गर्न चाहन्छु। यो विधि हामी दृष्टिकोण ज्ञान आवश्यक छैन भन्ने तथ्यलाई द्वारा मूल छ।
के तपाईं लागि तयार गर्न आवश्यक?
कागज चित्रकला। यो पानी सोख छैन भनेर यसलाई तंग गर्न उचित छ।
Watercolors बेहतर। यी रंग यदि तपाईं, तपाईं रंग र gouache र एक्रिलिक सक्नुहुन्छ गर्छन्। अर्को शब्दमा, कुनै पनि रंग, जो पानी संग पतला।
स्पन्जले, तपाईं लुगा धुने भाँडा लागि एउटा सानो स्पन्जले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्यालेट प्लेट वा स्पन्जले काम सुविधाको लागि।
एक शरद ऋतु चित्रकला तपाईं पाउनेछन् परिदृश्य। यो विधि कल्पना र रचनात्मकता लागि कुनै रूपरेखा छ। तपाईँको सुविधाको लागि, लेख स्पष्ट तपाईं कसरी शरद ऋतु परिदृश्य रंग गर्न भन्नेछु कि फोटो पोस्ट गरिनेछ।
तपाईंले सुरू गर्नु अघि, रंग गामुट निर्धारण। हामी शरद ऋतु आकर्षित देखि, मुख्य रंग पहेंलो, सुन्तला, खैरो र रातो छन्। हामी आकाश लागि एक सानो नीलो र आवश्यक हुनेछ गाढा खैरो रंग रूख शाखा गर्न।
Lay एक पाना कागज अघि। एक सानो प्यालेट चाहेको रंग पतला, स्पन्जले रंग लो र हल्कासित कागज मा लागू हुन्छ। सुन्तला को एक बिट, एक सानो नीलो, आदि
तपाईं एक तस्वीर वा अन्य छवि हुनेछ भने, समय समयमा काम बाट सार्न टाढा र संकुचित आँखा रंग स्थलहरू तुलना गर्नुहोस्। यो चरण मा, धेरै हल्कासित रंग लागू, यो अत्यधिक पानी संग पतला हुनुपर्छ, तर स्पन्जले देखि ड्रिप छैन।
कागज सुक्खामा एक सानो दिनुहोस्। यो चरण तपाईं रंग को दोस्रो कोट लागू छ। तर पाना, सम्पूर्ण सतह माथि र पत्ते तिर्न थप ध्यान। नीलो आकाश, अब छुन छैन।
अब तीन वा चार ठाउँमा भएको स्पन्जले रंग महत्तव बनाउन। यो अन्त गर्न, रंग अझ तीव्र रंग लिनुपर्छ।
यो माझ्छु समय छ। एक खैरो रंग रूख शाखा आकर्षित। तिनीहरूले यसलाई थिए शरद ऋतु पात मार्फत देखाउन छन्।
निस्सन्देह, तपाईंले एक पेन्सिल शरद ऋतु परिदृश्य "पैदल" पेंट्स आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि मात्र। तर यो विधि राम्रो छ तपाईं आफ्नो ढाँचा प्रयोग रंग स्थलहरू सिर्जना छ। यहाँ आफ्नो कल्पना मा काम मा, र तपाईँले शरद ऋतु को विषय मा सुधार।
अब तपाईंलाई थाहा मूल बाटो कसरी तान्ने शरद ऋतु परिदृश्य। र यो विधि, मूल्य एक परिदृश्य आकर्षित गर्ने क्षमता, तर रंग स्थलहरू आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता छ।
कला पीटर्सबर्ग एकेडेमी: इतिहास, संस्थापक, शैक्षिक
कसरी समुद्र तट मा आकर्षित गर्न? चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण
Soprano - चाँदी आवाज
Faber Castell: काम, स्कूल र कामको लागि यांत्रिक पेन्सिल
Dizzy, के गर्न चाहनुहुन्छ, टाउकोमा शोर के गर्न
Cutlets गर्न garnish लागि के खाना पकाउनु।
आफ्नै स्लाइडहरू प्रस्तुतीकरण कसरी बनाउने?
उद्यमी तमाम लाभकारी